Lake Michigan: sifooyinka, asal ahaan, flora iyo fauna | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 24/12/2021 10:00 | Kala bixid
El harada michigan waa mid ka mid ah shanta balli ee waaweyn ee Waqooyiga Ameerika. Waxaa ku hareereysan magaalooyin dhowr ah oo ku yaal Mareykanka, kuwaas oo mid ka mid ah uu la mid yahay harada soo jiidashada badan, waxaana hareeraheeda isugu yimaada in ka badan 12 milyan oo qof.
Sidaa darteed, waxaan dooneynaa inaan u hibeyno maqaalkan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Lake Michigan, sifooyinka iyo muhiimada.
2 Tilmaamaha Lake Michigan
3 Cimilada Lake Michigan
4 Flora, fauna iyo geology
5 Harada Michigan halyeeyo iyo xiiso leh
Harada Michigan waa qayb ka mid ah harooyinka waaweyn ee isgoysyada Maraykanka iyo Kanada. Laakiin gabi ahaanba waa gudaha dhulka Maraykanka. Daraasadaha qadiimiga ah ayaa muujiyay taas Haradaan waxaa la sameeyay qiyaastii 13.000 oo sano ka hor, ka dib waqtigii barafka ee ugu dambeeyay.
Barafkii markuu dhalaalay ayaa waxaa meesha ku haray beesooyin aad u waaweyn oo ay biyo ka buuxaan.Barafkaas iyo walxo kale oo dareere ah ayaa ka soo unkamay harada iyo afartii kale ee kooxda.
Harada Michigan waa harada labaad ee ugu weyn kooxda harooyinka waaweyn; Waxaan is arkay anigoo ku biiraya harada Huron ee Straits of Mackinac, halkaas oo biyaheedu ay isku daraan si ay u sameeyaan jidh biyo ah oo loo yaqaan harada Huron, Michigan. Waxaa xusid mudan in cidhiidhigu uu ahaa waddo ganacsi oo dhogor ah oo muhiim ah wakhtiyadii hore.
Qoto dheer ee haradan ayaa markii ugu horreysay lagu arkay socdaal uu ku jiray 1985, kaas oo uu hoggaaminayay saynisyahan ka tirsan Jaamacadda Wisconsin oo lagu magacaabo J. Val Klump; u suurtagashay in ay adeegsato biyaha quusa si ay u samayso baadhitaan lagu ogaanayo 281 mitir.
Tilmaamaha Lake Michigan
Sifooyinka harada Michigan waa waxa ay ka soocaan harooyinka kale ee adduunka, sifooyinkaas waxaad ku fahmi kartaa dhinacyo badan oo aasaasi ah oo harada ah, oo ka mid ah harooyinka waaweyn waxay ku jirtaa kaalinta labaad ee miisaanka Ameerika.
Dareenkan, waxaa la dhihi karaa in harada Michigan ay leedahay astaamahan soo socda:
Waa haro ku taal gebi ahaan Maraykanka iyo Waxay ka tirsan tahay gobolka harooyinka waaweyn.
Waxaa ku hareeraysan Indiana, Illinois, Wisconsin iyo Michigan Americans.
Waxay daboolaysaa dhul dhan 57.750 kiiloomitir laba jibaaran, iyadoo jooggeedu yahay 176 mitir iyo qoto dheer oo biyo ah 281 mitir.
Dhererkiisu waa 494 kiiloomitir, ballacuna waa 190 kiiloomitir.
Waxay leedahay taxane jasiirado gudaha ah oo la yiraahdo: Beaver, North Manitou, South Manitou, Washington, iyo Rock.
Waxay ka heshaa biyo dhowr wabi waxayna ku biirtaa wabiga Saint Lawrence ee ku yaal baskeeda.
Dhowr magaalo ayaa ku urursan xeebteeda, laakiin kuwa ugu caansan waa Chicago, Milwaukee iyo Muskegon.
Kalluumeysiga isboortiga iyo ganacsiga ayaa lagu qabtaa harada, kalluun iyo noocyo kale ayaa la qabtaa, waxaana la soo bandhigay salmon.
Waxa la helay 1634kii, sahamiye Faransiis ah oo lagu magacaabo Jean Nicolet.
In harada this soo muuqday dundumo ciid ah oo lagu daboolay cawska cagaaran iyo jeeriga xeebta, xitaa xagaaga dambe biyuhu halkan waa qabow oo hufan, heerkulkuna waa mid wanaagsan.
Waxaa harada Michigan ku yaal dhagxaan Petoskey. Kuwani waa xusuuso qurux badan oo ka yimid harada. Waxaa loo tixgeliyaa dhagxaanta rasmiga ah ee harada. Aad bay u qurxiyeen. Waxay leeyihiin muuqaal fossils oo si qurux badan loo xardhay. Waxay ku gaar yihiin deegaanka waxayna ka weyn yihiin 3. Boqol iyo konton jir.
Cimilada Lake Michigan
Tani waa haro aad u qurux badan, waxaana lagu talinayaa in la booqdo gaar ahaan inta u dhaxaysa Juun iyo Sebtembar, maadaama cimiladu tahay mid kulul oo qayb ahaan daruuraha ah taariikhdaas, inkastoo jiilaalka uu yahay mid aad u qabow. Heerkulka aaggan guud ahaan wuu kala duwan yahay inta u dhaxaysa -7 ° C iyo 27 ° C, iyo qiyamka kuwan dhif ah si weyn u beddelo, haddii ay sameeyaan, ma gaari doonaan -14 ° C ama ka badan 30 ° C. Laakiin xaqiiqada hadda waa ka duwan yahay, tan iyo heerkul hoose sida -45 ° C ayaa la xaqiijiyay, taas oo sabab u ah. biyaha harada Michigan way barafoobeen.
Biyuhu waxay wajahayaan waxa loogu yeero saamaynta harada: jiilaalka, dabayshu waxay sababtaa uumiga si ay u soo saaraan barafka, laakiin xilliyada kale, marka ay nuugaan kulaylka oo ay qaboojiyaan hawada xagaaga iyo dayrta, sidoo kale waxay nidaamiyaan heerkulka. Tani waxay u ogolaaneysaa muuqaalka suumanka miraha, taas oo ah wakhti marka tiro badan oo miro ah laga soo goosan karo gobollada koonfureed.
Flora, fauna iyo geology
Sida harooyinka intooda badan, muuqaalka juqraafi ee harada Michigan waa in uu jiro niyad-jabka dhulka, halkaas oo biyaha laga soo ururiyo dhowr wabi; Marka laga soo tago tiro macdan ah sida birta, macdanahan ayaa markii dambe loo raray buuraha Appalachian. Laga soo bilaabo meelaha dhuxusha laga soo saaro.
Qaab dhismeedka dhulka ee carrada dhulkaas ayaa ka dhigaysa inay qani ku yihiin wax soo saarka cuntada sababtoo ah aad ayay u bacrin yihiin waxayna leeyihiin kaymo waaweyn. Harada Michigan waxaa lagu gartaa joogitaanka swamps ee ay soo galeen biyaha; waxaa jira caws dhaadheer, savannas, iyo dhul-cameedka dhaadheer, kuwaas oo dhamaantood ka dhigaya deegaan aad u fiican oo duur-joogta ah.
Dareenkan, xayawaankeeda waxaa matala kalluunka sida trout, salmon, snook iyo pike perch, dhammaan ku habboon hawlaha kalluumeysiga isboortiga. Waxa kale oo jira kalluunka gurguurta, isbuunyada, laambadaha badda, gorgorka iyo noocyo kale oo badan oo shimbiraha ah sida Swans, berriga, tukuhu, shinbiraha, gorgorrada, gorgortanka iyo qaar kale oo badan, maadaama ay badu leedahay xoolo duur-joog ah.
Harada Michigan halyeeyo iyo xiiso leh
Sida laga soo xigtay wakaaladda socdaalka iyo madadaalada, Lake Michigan waxaa ku hareeraysan taariikh la mid ah Loch Ness ee Scotland, halkaas oo la sheegay in uu jiro xayawaan leh astaamo taxane ah oo taariikhi hore ah oo la ogaaday inuu mas'uul ka yahay bixinta adeegyada dalxiiska ee gobolka. ilaa 1818kii.
Dad badan ayaa aaminsan in bahal kan weyn ee mas u eg uu dhab ahaantii, sida lagu tilmaamay, uusan ahayn mid dhab ah, sababtoo ah qofna uma soo dhowaan, ama ugu yaraan ma jiro qof si cad u sawiray, sidaas darteed tani waxaa loo arkaa inay qayb ka tahay halyeyga dadka deggan. degaanka la buunbuuniyay si loo soo jiito dalxiiska.
Ma waxaad u malaynaysaa inay jiraan daanyeero ku sugan harada Michigan iyo in kale, tani waa fursad xiiso leh inaad la kulanto oo aad fasax qaadato, sababtoo ah waxaad ku dabaalan kartaa biyaheeda, waxaad ku raaxaysan kartaa maalin nasasho leh gudaha kaynta ama waxaad baran kartaa uun. Kuwa jecel barafka iyo jiilaalka, goobtani way barafoobaan xilligaan sanadka, si aad u tababarto ciyaaraha jiilaalka sida skiing.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto harada Michigan iyo sifadeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Harada Michigan